Mashiinka Mashiinka CNC ee ahama Qalabka birta ahama iyo alaableyda | Ouzhan
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka sameysan birta birta ah waa kaarboon, chromium, nikkel, iyo qaar ka mid ah waxyaabaha isku dhafan sida molybdenum, copper, iyo nitrogen. Waxyaabaha ugu weyn ee alwaaxda ku leh birta birta ah waa Cr (chromium), oo keliya marka waxyaabaha ku jira CR ay gaaraan qiime cayiman, birtu waxay leedahay caabbinta daxalka. Sidaa darteed, birta aan xarka lahayn guud ahaan waxay ka kooban tahay ugu yaraan 10.5% oo Cr (chromium) ah.
Ahama qaybood axdi qarameedka ahama CNC
Birta aan xarka lahayn ayaa sidoo kale ka kooban waxyaabo ay ka mid yihiin Ni, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si, iyo Cu. Bir daxal laheyn waxay leedahay astaamo aad u fiican sida xoog u gaar ah, iska caabbinta xirashada sare, iska caabinta daxalka ka sarreeya iyo u adkeysiga miridhku. Sidaa darteed, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha, mashiinnada cuntada, warshadaha korontada, warshadaha qalabka guryaha iyo qurxinta guriga, warshadaha dhammeeya. Codsiga iyo rajada horumarka ee birta birta ah ayaa sii ballaadhi doonta oo sii ballaadhanaysa, laakiin codsiga iyo horumarinta birta aan lahayn ayaa inta badan lagu go'aamiyaa heerka horumarka tiknoolajiyada daaweynta dusha sare.
Faa'iidooyinka qaybaha Ouzhan ee la shiiday ee ahama
- Cagaarka iyo ilaalinta deegaanka, birta biraha ah ayaa 100% dib loo isticmaali karaa, mana keeni doonto wasakheynta deegaanka, waxayna ku habboon tahay horumar waara; Qashinka birta ah ee birta ah ayaa sidoo kale leh qiime dhaqaale oo weyn.
- Waxyaabaha kiimikada ah: U adkaysiga kiimikada iyo u adkaysiga daxalka elektaroolka kiimikada ayaa ah kuwa ugu fiican qalabka birta, oo kaliya kan labaad oo keliya.
- Waxyaabaha jirka: iska caabinta kuleylka, iska caabinta heerkulka sare, iska caabinta heerkulka hooseeya iyo xitaa adkeysiga heerkulka aadka u hooseeya.
- Qalabka farsamada: Marka loo eego noocyada kala duwan ee birta birta ah, aaladaha farsamada ayaa ka duwan. Birta biraha ah ee Martensitic waxay leedahay xoog iyo adkaansho, waxayna ku haboon tahay soo saarida qaybaha u adkaysta daxalka ee u baahan xoog sare iyo iska caabbinta dharka sare, sida fallaadhaha mashiinka hareeraha iyo birta aan lahayn. Mindiyaha, biraha birta ah ee birta ah, iwm., Birta austenitic ahama waxay leedahay baaxad wanaagsan, ma aha awood sare laakiin waa iska caabinta ugu wanaagsan ee daxalka ka dhex jirta birta birta ah. Waxay ku habboon tahay munaasabadaha u baahan iska caabbinta daxalka laakiin aaladaha farsamada oo hooseeya, sida dhirta kiimikada iyo dhirta bacriminta. Qalabka qalabka ee sulfuric acid iyo soosaarayaasha acid hydrochloric, iwm, dabcan, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa warshadaha milatariga sida gujisyada. Ahama Ferritic ahama waxay leedahay sifooyin dhexdhexaad farsamo iyo xoog hooseeya, laakiin waa iska caabin ah qayilo oo ku habboon qaybaha kala duwan ee foornada warshadaha.
- Waxqabadka geedi socodka: Birta birta ah ee Austenitic waxay leedahay waxqabadka geedi socodka ugu fiican. Sababtoo ah balaastigga wanaagsan, waxaa looga baaraandegi karaa taarikooyin kala duwan, tuubooyin iyo astaamo kale, kuwaas oo ku habboon ka shaqeynta cadaadiska. Birta biraha ah ee Martensitic waxay leedahay waxqabad habsami u liidasho sababtoo ah adkaansho badan.
OEM kartoo adeegga axdi qarameedka ahama-Shiinaha Shanghai CNC ahama qaybood axdi qarameedka ahama
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, waxay ka baaraandegi kartaa birta aan birta lahayn oo leh qaybo axdi qarameedka CNC oo xasilloon oo lagu kalsoonaan karo. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha mashiinka axdi qarameedka ahama. Intaa waxa u dheer, alaabada birta ah ee la shiiday ee CNC ayaa si adag u waafaqsan heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan u ah birta birta ah ee alaabada birta ah ee macaamiisha qiimaha leh.
Maxay yihiin isticmaalka qaybaha birta la shiiday ee birta aan lahayn
1. Qaybo ka mid ah Austenitic ahama oo la shiiday ayaa leh waxqabad dhameystiran oo wanaagsan, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa cuntada, qalabka kiimikada guud, iyo tamarta atomiga;
2. Qaybo milled birta ah oo milled birta ah, oo si ballaaran loogu isticmaalo walxaha u adkaysta daloolka;
3. Qaybo milled Martensitic ahama, miller, si ballaaran loo isticmaalo qalabka u adkaysta sulfuric acid, fosfoorik acid, formic acid, iyo acetic acid;
4. Qaybo ka shiidan Chromium-nickel-molybdenum ahama, oo si ballaaran loogu adeegsado turxaan bixinta saliidda, bacriminta, warqadda, batroolka, kiimikada iyo warshadaha kale si loo soo saaro kuleylleyda iyo kondensiyada.
Faa'iidooyinka adeegga macdanta birta ee birta ah ee Ouzhan
- Ouzhan waxay leedahay waaxda kormeerka tayada gaarka ah, ka hor inta aan la dirin, si loo hubiyo in dhammaan alaabooyinka ay ku dhex jiraan qaladka.
- Awoodda wax soo saar sarreysa iyo qiimaha tartanka.
- Dhammaan waxsoosaarka saxda ah ee CNC ee birta birta ah la shiiday waxay ku xiran tahay baaritaanno tayo leh oo adag.
- Adeegga degdegga ah ee OEM wuxuu xaqiijin karaa inaad hesho alaabada aad rabto, taageer DDP, CIF, FOB iyo hababka kale ee lacag bixinta gaadiidka si loo hubiyo in macaamiisha ay alaabada u heli karaan si badbaado leh.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo soo saaro saxnaanta qaybo ka mid ah birta birta ah.
- Ouzhan waxay leedahay wax ka badan mashiinada wax lagu farsameeyo, adeegyo isku dhafan, khadadka wax soo saarka caadiga ah, waxayna la yimaadaan shahaado qalab iyo warbixinno tijaabo ah.
Hore: Aluminium la safeeyey albaabka aluminium iyo qaybo ka baaraandegidda daaqadda
Xiga: Qalabka wax lagu shiido ee biraha ahama
Saaraha Shiinaha CNC caadadii mi steel carbon ...
Custom miling qaybood axdi qarameedka machining a ...
Axdi qarameedka steel OEM machining warshadaha p ...
Kartoo qaybo axdi qarameedka naxaas ah pr ...
Qaybo axdi qarameedka ahama proces ...